कश्मीर, अमेरिका र उत्तर-कोरिया दुनियाँमा आज कहाँ के भयो ? – Everest Dainik – News from Nepal
कश्मीर, अमेरिका र उत्तर-कोरिया दुनियाँमा आज कहाँ के भयो ?
हङकङः हङकङमा दुई महिनादेखि जारी आन्दोलनमा सहभागीमध्ये १ सय ४८ प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा ५३ जना महिला र ९५ जना पुरुष छन् । जसमध्ये १३ वर्षसम्मका बालबालिका समेत परेका छन् ।
वासिङ्टन स् उत्तर कोरिया भ्रमण गरिसकेका यात्रुका लागि अमेरिकाले विना अनुमति प्रवेशमा कडाइ गरेको छ । २०११ यता उत्तर कोरिया जाने मानिस यदी अमेरिकामा भएको खण्डमा उसले अब पर्यटक वा बिजनेस भिसाको लागि आवेदन दिनुपर्ने छ ।
काबुल स् अफगानिस्तानमा हुने भनिएको निर्वाचनका लागि गरिएको प्रचारको विरोध गर्दै तालिबानले धम्की दिएको छ । सेप्टेम्बर २८ मा हुने भनिएको राष्ट्रपतीय चुनाव रोक्न तालिबान समूहले चेतावनी दिएको हो । राजनीतिक दलका नेताहरुले चुनावी प्रचार गरिरहँदा तालिबानको धम्की आएको हो । अफगानिस्तानमा एक वर्षको अवधिमै २ पटकसम्म चुनावको मिति सारिँदैआएको हो ।
कंगोमा डुंगा दुर्घटना हुँदा ११ को ज्यान गयो, ५० बेपत्ता
कंगोः कंगोमा एक डुंगा दुर्घटना हुँदा ११ जना को मृत्यु भएको छ । अरु दर्जनौँ हराइरहेका छन् । यात्राको क्रममा रहेका १६ जना भने पौडिएर बाँच्न सफल भएका छन् । स्थानीय मिडियाका अनुसार ११ जनाको मृत शरीर भेटिएको र ५० जना हराएका हुन् । राजधानी किन्साला नजिकै मंगलबार दुर्घटना भएको हो ।
तेहरानः इरानका राष्ट्रपति हसन रौहानीले यदी अमेरिकाले इस्लामिक गणतन्त्रमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको खण्डमा वार्ता गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन् । वार्ताको लागि अमेरिकाले सबै किसिमका प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने उनको शर्त छ । यसअघिको प्रयास असफल भए पनि अबको वार्ता सम्भव भएको उनले शंकेत गरेका थिए । यदी अमेरिकाले यदी साँच्चिकै वार्ता गर्न तयार भए प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने शर्त उनले अघि सारेका हुन् ।
भेनेजुएलामाथि अमेरिकाको आर्थिक प्रतिबन्ध
वासिङ्टनः अमेरिकाले भेनेजुएलामाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको छ । राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प्ले यससम्बन्धी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । आदेशपत्रमा भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको तथा शक्तिको दुरुपयोग गरेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख छ ।
इमरान खान भन्छन्ः भाजपा हिटलरको नाजी जस्तै भयो
इस्लामाबादः पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीलाई हिटलरको नाजी पार्टीजस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
मंगलबार खानले संसदलाई सम्बोधन गर्दै यसो भनेका हुन् । भारतले कश्मीरको विशेषधिकार कटौती गरेपछि त्यसलाई पाकिस्तानी नेता खानले गम्भीर खतराको शंकेत भन्दैआएका छन् । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रावधानलाई समेत भारतले उल्लंघन गरेको औंल्याएका छन् । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्तता चाँडै खाँचो भएको उनले बताए । एजेन्सी ।
ट्याग्स: अमेरिका, उत्तर कोरिया, कश्मीर